Maloota akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi Tiwiitaraa sobaa adda baafachuuf nugargaaran! – ኢትዮጵያ ቼክ
Maloota akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi Tiwiitaraa sobaa adda baafachuuf nugargaaran!
Akkaawuntiiwwanfi fuulawwan Feesbuukii sobaa maqaafi suuraa namootafi dhaabbilee bebeekamoo fayyadamuun banaman odeeffannoowwan sobaafi haasaa jibbiinsaa yeroo maxxansan mul’ata.
Akkaawuntiiwwan maqaa namootaafi dhaabbilee dawoo godhachuun banaman kunneen beekkamtii namootaatti fayyadamuun yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota heddu horatu.
Kana malees odeeffannoo fedhan maxxansuufi qooduun hawaasa yeroo burjaajessan arguunis baramaa dhufeera.
Dhaabbatni Meta /Feesbuukii/ ji’oota sadeen Adoolessa hanga Fulbaana 2021 keessa qofa akkaawuntiiwwan Feesbuukii sobaa Biiliyoona 1.8 irratti tarkaanfii fudhachuu hime.
Feesbuukii malee akkaawuntiiwwan Tiwiitaraa maqaa namoota bebeekamootin banamanis danuudha.
Itoophiyaa Cheek akkaawuntiiwwan sobaa maqaa namootaafi dhaabbileen banaman saaxilaa kan ture yemmuu ta’u, Ergaa Wiixataa keenya har’aatin immoo maloota akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi Tiwiitaraa sobaa adda baafachuuf nugaragaaran isinif dhiyeessineerra.
* Akkaawuntiin Feesbuukii yookiin Tiwiitaraa tokko shakkisiisaa ta’ee yoo nutti mul’ate akkaawuntiiwwan maqaa nama yooiin dhaabbata sanaan banaman kunneen biroo barbaaduun yaa ilaallu. Tarii namni ykn dhaabbatni sun akkaawuntii sirrii /Verified/ qabaachuu danda’a waan ta’eef.
* Yeroo akkaawuntichi itti baname ilaaluu. Akkaawuntiiwwan sobaa baay’een yeroo dhiyootti kan banamanidha.
* Yeroo baay’ee suuraawwan pirofaayilii akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi Tiwiitaraa sobaa intarneetii irraa kan fudhatamanidha. Yeroo baay’ees akkawuntiiwwan kun suuraa tokko qofa qabu.
Kana malees fayyadamtootni Feesbuukii sirriin baay’inaan suuraawwan isaaniifi kan maatii ni maxxansu. Akkaawuntiiwwan sobaa garuu faallaa kanaan suuraa baay’inaan hin maxxansan.
* Akkaawuntiiwwan Feesbuukii sobaa odeeffannoo dhuunfaa /About/ shakkisiisaa qabu. Kunis odeeffannoowwan akka iddoo dhalootaa, iddoo jireenyaa, barnoota, hojiifi kkf dha.
* Dhimmi akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi Tiwiitaraa sobaa ittiin beekaman inni biraan qabiyyee odeeffannoo isaan maxxansanfi qoodani.
Akkaawuntiiwwan sobaa maqaa namoota bebeekamoo fayyadamuun banaman yeroo baay’ee dhimmoota falmisiisoo ta’an akkasumas hawaasa burjaajessan yeroo maxxansan mul’ata.
Kanaaf qabiyyee maxxansichaa xiinxaluun dhugummaa akkawuntichaa kan shakkii keessa galchu yoo ta’e odeeffannoo sana ofitti fudhachuu keenyaan dura dhugummaa akkaawuntichaa mirkaneeffachuun barbaachisaadha.
Akkaawuntiiwwan Feesbuukiifi Tiwiitaraa sobaa odeeffannoowwan sobaafi haasaa jibbiinsaa hawaasa keessa facaasuu isaanin dabalataan namoota yookin dhaabbilee maqaasaaniitti fayyadamuun banan irrattillee miidhaan akka qaqqabu gochuu danda’u.
Kanaafuu akkaawuntiiwwan miidiyaalee hawaasummaa hordofuu keenyaan dura dhugummaa isaanii mirkaneeffachuun barbaachisaadha.
Kana malees akkaawuntiiwwan sobaa yoo agarre akka cufamaniif dhaabbilee miidiyaa hawaasaatti iyyachuun /’report’ gochuun/ barbaachisaaadha.